Sidee loo hagaajin karaa liiska alaabta ee Amazon leh ereyada muhiimka ah ee dheeraadka ah?
Aan wajahno - iyada oo la adeegsanaayo alaabtameynta alaabada A9 ee raadinta, ereyada muhiimka ah ee Amazon muddo dheer hadda waxay leedahay awood aad u sareysa, gaar ahaan marka la barbardhigo Google AdWords. Waxay micnaheedu tahay in ay jirto miisaan aad u weyn oo ka mid ah ereyada muhiimka ah ee aan weli dhicin iyo ereyada raadinta gaarka ah ee laga helayo Amazon by kasta oo iibiyaha ah oo diyaar u ah oo diyaar u ah inuu waqti ku qaato baaritaanka iyaga oo helaya faa'iido awood leh oo tartan ah. Taasi waa sababta aad uga fakarayso sicir-barar hoose oo ku yaalla Amazon iyadoo la adeegsanayo ereyada dheeraadka ah iyo ereyada raadinta ee la xidhiidha, waxay macno ahaan noqon karaan fursad dahabi ah.
Shaki kuma jiro in ereyada muhiimka ah ee Amazon iyo jumlada raadinta ay noqon karaan kuwo aad u faa'iideysanaya iibiyaha kasta, badanaa sababtoo ah waxay yihiin waxyaabaha ugu horreeya ee saldhig u ah codsiyada raadinta ee joogtada ah oo badanaa loo isticmaalo kuwa iibsadayaasha ah. Maxay tahay - waxaa loola jeedaa in ereyada muhiimka ah ee Amazon ay ku xisaabtami karto qadar weyn oo ah runtii qiimo aad u qiimo badan oo wali raadinaya raqiis raqiis ah oo loo isticmaalo faa'iidadaada.
gaadiidka. Sidaa darteed, inta badan ee naga mid ah ayaa laga yaabaa in ay aaminsan yihiin in ay leeyihiin awood yar oo iibka ah, gaar ahaan haddii la barbardhigo kuwa ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'keywords keywords'. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, in ay dhacdo in la dejiyo diiradda ugu weyn, oo ah calaamadaha muhiimka ah ee Amazon dheer, macaamiisha aad macquul ahaan karto laga yaabo inay noqoto mid dhab ah la beegsaday. Si fudud sababtoo ah waxaad u maleyneysaa in aad ku soo baxday soo-bandhigto jilitaanka beddelka. Taas macnaheedu waa in aad inta badan ku raaxaysatid qiimo weyn oo isbedel ah, inta badan natiijada saamiga libaax ee macaamiisha ayaa u muuqda inay u badan tahay in ay fuliyaan iibsashada dhabta ah adoo isticmaalaya erayo muhiim ah. Ma aha oo keliya hal qof.
Laakiin halkan waxaan ugu dambeyntii ku soo boodeynaa - caqabada ugu weyn ee Amazon iyo keywords keywords waa in ay dhab ahaantii aad u adag tahay in la helo, halkii laga heli lahaa keywords kale oo fudud iyo jumlad search..Waxaan u jeedaa in qeexida ereyada muhiimka ah ee erayga gaaban aan aheyn mooyaane, laakiin calaamadaha guud ee la isku dardargeliyo si sahlan, iyada oo aan loo baahneyn baaritaanno muhiim ah oo loo baahan yahay. Dhanka kale, si kastaba ha ahaatee, jumlado raadin dheer oo dheer ah ayaa sida caadiga ah loo qaabeeyay si cad oo qarsoodi ah oo qarsoodi ah - oo ay adag tahay in lagu muujiyo ganacsi kasta, oo ay ku jiraan kuwa iibiya Amazon. Oo halkan waa laba hab oo muhiim ah oo lagu dhisayo liiska kormeerka bilowga ah iyo horumarinta iibintaada Amazon leh ereyada furaha dheer. Waa kuwan.
Ikhtiyaarkaaga koowaad, waxaan kugula talineynaa inaa socdo olole joogto ah oo PPC ah. Sidaa oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad wado waddo adiga oo raacaya Warbixinta Xilliga Raadinta ah kuwaas oo daboolaya shuruudahaaga raadinta ee ku haboon - oo aad samaysay. Si kastaba ha ahaatee, ogow, habkan asaasiga ahi wuxuu caddaynayaa inuusan ku filneyn, badanaa sababtoo ah waxay badanaa bixisaa liiska dheer ee ereyada muhiimka ah, taas oo fududeyn karta in la isku daro, ugu yaraan kali.
Fursadda labaad ee loo soo saaro liis guud oo daboolaya dhammaan calaamadaha muhiimka ah ee Amazon dheeriga ah waxay ku sameeynayaan iyada oo loo marayo qalab cilmi-baaris oo gaar ah oo loo qoondeeyey. Aniga ahaan, waxaan kugula talineynaa isticmaalka Sonar oo ay la wadaagto xogta weyn ee loo yaqaan 'keywords keywords' iyo erayada raadinta ee alaab kasta oo aad haysato. Waxyaabahani waa in qalabkani aanu kaliya kuu keenin top = fulinta fikradaha muhiimka ah (ku salaysan qiyaasta raadinta dhabta ah), laakiin waxay u oggolaaneysaa in lagu kala saaro mugga taraafiga (laga bilaabo sareeyo ilaa hooseeyo). Oo waxaa loola jeedaa in la isticmaalayo qalabkan gaarka ah ee loo qoondeeyey waxaad abuuri kartaa liiskaaga ugu muhiimsan ee muhiimka ah ee ugu muhiimsan ee loogu talagalay Amazon - si deg deg ah iyo sahlan Source .